Chee echiche, taa banyere nkpuru obi gi na mmekorita gi na ndi ozo site na iji obi eziokwu kachasi nma | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Na-atụgharị uche taa na mkpụrụ obi gị yana mmekọrịta gị na ndị ọzọ jiri ịkwụwa aka ọtọ kachasị elu
di Paolo Tescione - Jenụwarị 20, 2021
O we si ndi-Farisi, Is ziri ezi n'iwu ime ezi ihe n'ubọchi-izu-ike kari ime ihe ọjọ, idebe ndu kari ibibi ya? Ma ha kpuchiri ọnu. N'ilegharị anya gburugburu ha na iwe na mwute na obi kpọrọ nkụ ha, Jizọs sịrị nwoke ahụ: "Setịpụ aka gị." Ọ gbatịrị ya wee weghachi aka ya. Mak 3: 4–5
Mmehie na-emebi mmekọrịta anyị na Chineke, ma obi kpọrọ nkụ na-emebi ihe karịa n'ihi na ọ na-eme ka ihe ọjọọ mmehie kpatara. Na obi sie ike karị, ka ihe na-emebi emebi na-adịgide adịgide.
N’okwu ahụ dị n’elu, Jizọs wesoro ndị Farisii iwe. Mgbe mgbe, oke iwe na-abụ ihe mmehie, nke na-esite na enweghị ndidi na enweghị ọrụ ebere. Ma n’oge ndị ọzọ, oke iwe nwere ike ịdị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ịhụnanya maka ndị ọzọ na ịkpọ asị maka mmehie ha. N’okwu a, iwe Jizọs kpọrọ ndị Farisii obi bụ na ọ na-ewute ha na-ewe iwe dị nsọ. Iwe ya “dị nsọ” ewetaghị nkatọ na-enweghị isi; kama, ọ kpaliri Jizọs ka ọ gwọọ nwoke a n'ihu ndị Farisii ka ha wee mee ka obi ha dị nro ma kwere na Jizọs. Uzo ozo nke ozioma na-ekwu, "ndị Farisii gara ozugbo wee gbaa ndị Herọd izu imegide ya ka ha gbuo ya" (Mark 3: 6).
Ekwesiri izere isi ike nke obi. Ihe bụ nsogbu bụ na ndị isi ike anaghị abụkarị maka obi siri ike. Ha bụ ndị isi ike na ndị isi ike na-abụkarị ndị ihu abụọ. Ya mere, mgbe ndị mmadụ na-arịa ọrịa ime mmụọ a, ọ na-esiri ha ike ịgbanwe, ọkachasị mgbe ihu.
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-enye gị ohere dị mkpa iji nyochaa obi gị n'eziokwu. Naanị gị na Chineke kwesịrị ịbụ akụkụ nke nyocha ahụ dị n'ime na mkparịta ụka ahụ. Enye ọtọn̄ọ ke ndikere mban̄a mme Pharisee ye ndiọi uwụtn̄kpọ oro mmọ ẹnịmde. Si ebe ahụ, gbalịa iji obi eziokwu lee onwe gị anya. I bu isi ike? O kwenyesiri ike na nkwenkwe gị ruo n'ókè nke na ị chọghịdị iche na ị nwere ike mehie mgbe ụfọdụ? There nwere ndị ị na-etinye aka na esemokwu ị ka na-ebi? Ọ bụrụ na otu n’ime ihe ndị a bụ eziokwu, mgbe ahụ ị nwere ike n’ezie na-ata ahụhụ site na ajọ njọ nke mmụọ obi kpọrọ nkụ.
Na-atụgharị uche taa na mkpụrụ obi gị yana mmekọrịta gị na ndị ọzọ jiri ịkwụwa aka ọtọ kachasị elu. Egbula oge ileda anya na imeghe ihe Chineke nwere ike ịgwa gị. Ọ bụrụ n ’ịchọpụta na obere obi tara mmiri na isi ike, rịọ Onyenwe anyị ka ọ bata mee ka ọ dị nro. Mgbanwe dị otu a siri ike, mana ụgwọ ọrụ nke mgbanwe dị etu a enweghị atụ. Egbula ma chere. Na njedebe ọ bara uru mgbanwe.
Onye m hụrụ n’anya, n’ụbọchị nke a ka m na-emeghe onwe m n’ịchọpụta nke obi m ma kpee ekpere ka will nyere m aka imeghe oge ọbụla igbanwe mgbe m chọrọ ya. Karịsịa, nyere m aka ịhụ ụdị isi ike ọ bụla m nwere ike ịnwe n’obi m. Nyere m aka ịkwụsị isi ike, isi ike na ihu abụọ. Nye m onyinye nke obi ume alaeze, Onyenweanyi, ka obi m nwee ike ịdị ka nke gị. Jesus ekwere m na gị.